Muhaajir iska-dhige internetka siray - BBC News Somali
Muhaajir iska-dhige internetka siray
4 Agoosto 2015
Akoon Instagram-ka oo u muuqday inuu lahaa muhaajir ururinayay jidka safarkiisa laga soo bilaabo Senegal ilaa Yurub, ayey kumanaan ku taxmeen iyadoo uu soo jiitay dareenka warbaahinta. Haatan, waxaa la ogaaday inuu been abuur yahay. Barnaamijka BBC Trending ayaa la hadashay ninka iska dhigay muhaajir.
Akoonka ayaa lagu sameeyay magaca Abdou Diouf ka yimid Dakar, oo bilaabay gelinta sawiro uu iska qaaday todobaadkii tagay, sheegayanaya inuu sawiranayo wadadiisa qatarta uu kaga baxayo Senegal kuna tagayo Yurub. Sawirada ayaa muujinaya isagoo dhoolocadeynaya oo la jira qoysiiska, kaddibna timaha loo jarayo ka hor safarkiisa.
Safarku ma sahlaneyn. Inkastoo, sawirka dambe uu muujinayo isagoo xilli mugdi ah saaran doon kuwa la buufiyo ah. Doomahaasi ayaa ah kuwa kaliya oo lagu gudbo iyadoo habeenki oo dhan la badeeleynayo. Dhabtii waa cabsi, ayaa hoos kaga qorneyd sawirka.
Ugu dambeyntii wuxuu u umuuqday mid dhulka gaaray. "Ugu dambeyntii dhulkii fursadaha. Waan isku daynay, waana faraxsanahay. Safar aad qatar u ah." ayuu qoray Diouf.
Akoonka ayey ku taxmeen in ka badan 8kun iyadoo ka hadalka sawirada ay keeneen fariimo dad mooday inuu safarku dhab yahay. Mid ka mid ah ayaa yiri. "Qaatir ayaan ka taagannahay malaayiintiina dadka ah ee isku dayaya inay halkan yihimaadaan, meel ma idinkaga banaana halkan". Balse dad badan ayaa taageeray Diouf oo ay ka mid aheyd mid yiri "Nasiib wacan walaal, wax wanaagsan ayaan kuu rajeynayaa, Alle hakuu fududeeyo". Wararka oo dhan ayaa sheekadan loogu tabiyay sidii mid run ah.
Tani waxay keentay shaki, balse hal wax ayaa jiray, "Diouf" wuxuu lahaa awood la yaab leh oo ah calaamadda uu u adeegsaday safarkiisa. Sida #Cimri dheer,#Riyoodihii sharci darada ahaa iyo kuwa kale. Magaca Diouf waxa uu ka helay madaxweynihii hore ee Senegal. Akoonka ayaa haatan la ogaaday inuu si kaftan u sameeyay sawirqaade, wuxuuna ahaa mid suuqgeyn loogu sameynayay dabaaldegga sawirada.
Ninka ka muuqda sawirka waxa uu u dhashay Spain, waxaana lagu magacaabaa Haji Toure, waxaana sawirada oo dhan lagu qaaday meel dhowr Mile u jirta magaalada Tomas Pena.
Akoonka ayey ujeedkiisu aheyd in lagu ogaada waxa ay ka aaminsan yihiin Yurubiyanka, muhaajiriinta ka imaanaya Afrika ee soo galaya qaaradda.